हात्ती दौड, पर्यटन र पशु अधिकार | Chitwan Post Daily | चितवन पोष्ट दैनिक
हात्ती दौड, पर्यटन र पशु अधिकार
यो समय मेला–महोत्सवको हो । ठाउँठाउँमा मेला–महोत्सवहरु आयोजना हुन्छन्, अब । ती मेलाको आवश्यकता के हो, औचित्य के हो ? यसमा धेरै चर्चा र परिचर्चा हुने गरेको छैन । पहिले गरियो, अब पनि गरौँ । उसले ग¥यो, हामीले पनि गरौँ भन्ने चिन्तनले मेला–महोत्सव गर्ने लहर चलेको छ, आजभोलि । केही महोत्सवहरु फलदायी पनि होलान् । स्थानीय उत्पादनको प्रवद्र्धन गर्न, त्यस क्षेत्रमा व्यावसायिक कारोबार बढाउन र मनोरञ्जन दिन पनि सकेका होलान् तर यस्तो ज्यादै कम हुन्छ । खासमा मेला–महोत्सवको तत्कालीन आकर्षणभन्दा दीर्घकालीन प्रभाव के–कस्तो पर्छ भन्ने चिन्तन राख्नेहरु अत्यन्त न्यून छन् ।
आयोजकको नाम र मेलाका स्थान फरक होलान्, नभए देशका जे–जति ठाउँमा जे–जस्ता शीर्षकमा मेला–महोत्सव राखिन्छ, त्यसमा प्रायः एकैनासको दृश्य देखा पर्छ । सांस्कृतिक कार्यक्रम, बाल उद्यान, मौतका कुवा, प्रायःजसो मेला–महोत्सवमा यी छुट्दै छुट्दैनन् । नेपालमा हुने मेला–महोत्सवले आयोजक र देशको अर्थतन्त्रलाई भन्दा बढी फाइदा भारतबाट आएर मौतका कुवा, पिङ र सर्कस देखाउनेलाई भएको हुन्छ । यी नभई महोत्सव–मेला नै चल्दैनन् भन्ने पिलन्धरे सोचमा हुन्छन्, आयोजकहरु ।
चितवनमा पनि मेला–महोत्सवको रौनक सुरू भएको छ । चितवन महोत्सवको तयारी सुरू भएको छ । पर्यटकीय नगरी सौराहामा हात्ती महोत्सवको दिन नजिकिएसँगै आयोजकहरुको दौडधूप सुरू भएको छ । चितवन महोत्सवको आवश्यकता र शैलीमाथि पनि प्रश्न उठ्न थालेका छन् । अहिलेलाई त्यतातर्फ नलागी हात्ती महोत्सवमा केन्द्रित हुन खोजिएको छ । वास्तवमा हात्ती महोत्सव सौराहाको ब्रान्ड बनेको छ । तर, जुन शैलीले यो महोत्सव हुन्छ, त्यसले सौराहाको पर्यटन व्यवसायमा कालो धब्बा लागाउने सम्भावना पनि प्रबल नै छ ।
सौराहाको पर्यटन प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यका साथ हात्ती दौड सुरू भएको हो । यो सोच नै अलि ठीक भएन । वास्तवमा सौराहाको प्रवद्र्धन अब आवश्यक छैन । देश–विदेशमा सौराहा भनेर नचिन्ने अब कम मात्रै छन् । त्यसैले, सौराहालाई प्रवद्र्धन गर्नभन्दा पनि व्यवस्थापन गर्न आवश्यक देखिन्छ । तर, हामीले प्रवद्र्धनका लागि भनेर संख्या जुटाउने पर्यटकीय गतिविधि सुरू ग¥यौँ । यो गतिविधि सुरू गर्नुको खास उद्देश्य थियो, क्रिसमस र अंग्रेजी नयाँ वर्षमा पनि विदेशी पर्यटकहरुलाई चितवनमै राख्ने वातावरण बनाउनु । यो घोषित उद्देश्य पटक्कै पूरा भएन, तैपनि महोत्सव जारी छ । हात्ती महोत्सव हेर्न चितवन जिल्ला र यसआसपासका व्यक्तिहरुको भीड लाग्छ । तर, यसले वन्यजन्तुमा आधारित सौराहाको पर्यटनको विकासमा कति टेवा दियो त ? यसको जवाफ छैन आयोजकहरुसँग ।
अर्थात्, महोत्सव सुरू गर्नुको उद्देश्य पूरा भए पनि नभए पनि हामी यसलाई निरन्तरता दिनचाहिँ कटिबद्ध छौँ । गत वर्षकै तथ्याङ्क हेर्ने हो भने पनि सौराहा आउने विदेशी पर्यटकको संख्या पुस महिनामा बढेको देखिँदैन । १२ महिनामध्ये सौराहामा भदौपछि सबैभन्दा कम पर्यटक आउने महिना पुस रहेको गत वर्षको संख्याले देखाएको छ । नेपाली पर्यटकको संख्यालाई लिएर भने केही सन्तोष गर्ने ठाउँ छ । सौराहामा तीन हजारभन्दा बढी स्वदेशी पर्यटक निकुञ्ज घुम्न आउने वर्षमा पाँच महिना मात्रै रहेछ, जसमध्ये पुस पनि एक हो । अब यसमा हात्ती दौडको प्रभाव रह्यो भनेर व्याख्या गर्न प्रशस्तै सकिन्छ । तर खोजेको एउटा, भयो अर्कै भन्ने यसले देखाउँछ । अर्थात्, विदेशीलाई तान्न खोजेको स्वदेशी पो लोभिए भन्ने प्रस्ट भएको छ । अर्थात्, हामी मूलभूत उद्देश्यमा असफल भएको दृष्टान्त पनि हो यो ।
यो भयो, उद्देश्यमाथिको बहस । हात्ती दौडलाई पशु अधिकारका नजरले पनि हेर्न थालिएको छ । हात्तीमाथि अत्याचार भयो भनेर हिजो–अस्तिसम्म गाइँगुइँ सुनिने आवाज अहिले अलि बढी उठ्न थालेको छ । हात्ती महोत्सव हात्तीको आचरणअनुकूलको छ या छैन, हेर्नुपर्ने मुख्य कुरा यो पनि हो । चितवन निकुञ्जका हात्तीहरुलाई अचेल १२ महिना नै फुर्सद हुन छाडेको छ । पर्यटकको संख्या बढेसँगै हात्तीहरु बिहानदेखि साँझसम्म दौडेका दौड्यै हुन्छन् । पर्यटक बोक्न जाँदा पनि स्वाभाविक गतिमा देखिँदैनन्, हात्तीहरु । मानौँ, कुनै ट्याक्सी दौडिएको छ कि भन्ने देखिन्छ । अब यिनै हात्तीलाई हात्ती महोत्सवमा ल्याएर सयौँको भीडमा दौडाइन्छ ।
हात्ती आफैँमा दौडने जनावर होइन, यो जनावर मूलभूत रुपमा जंगली आचरणको हुन्छ । जंगलमा पनि आवश्यक परेका बेलामा मात्रै छोटो दूरीका लागि दौडन्छ । त्यो भनेको कसैलाई खेद्नु परेमा वा कसैबाट जोगिनु परेको अवस्थामा मात्रै हुने गर्छ । तर, हामी त्यो हात्तीलाई ल्याएर मान्छेका बीचमा दौडाउने गर्दछौँ । कसैको प्राकृतिक स्वभावभन्दा भिन्न व्यवहार गरिन्छ भने त्यो अत्याचार हो । त्यसैले, हात्ती दौडले हात्तीमाथि अत्याचार हुन्छ । सौराहाका हात्तीले स्याहार नपाएको व्यापक सुन्नमा आउँछ । स्याहार नपाएका हात्तीलाई दौडाएर हामीले मनोरञ्जन लिनु अत्याचार नै हो । हात्तीहरु भकाभक मर्न लागेको कुरा छ । यसरी हात्तीको ज्यानकै बाजी राखेर पर्यटनको विकास गर्ने ? हात्ती दौडको आवश्यकता के–कस्तो हो, विचार गर्न अपरिहार्य भएको छ । यो हात्तीको अधिकारको मात्रै प्रश्न होइन, मान्छेमाथिको खेलबाडको विषय पनि हो ।
हात्तीलाई मान्छेले नियन्त्रणमा लिन सकेको छ, तर यो जनावर अझै पूर्ण रुपमा घरपालुवा हुन भने सकेको छैन । हात्तीको स्वभाव आक्रामक हुन्छ । प्रतिकूल अवस्थामा उत्तेजित भएर हात्तीले धेरै विध्वंस मच्चाउने गर्छ । यस्तो जनावरलाई हामी उसको आचरणसँग नमिल्ने गतिविधिमा सामेल गराएका छौँ, त्यो पनि मान्छेहरुको भीडमा, जहाँ हात्ती र मन्छेबीच कुनै सुरक्षा घेरा हुँदैन । संयोगले अहिलेसम्म त्यस्तो कुनै नराम्रो भएको छैन । कामना गरौँ, अब पनि नहोस् । तर, यस्तो विषयमा कामना गरेर मात्रै हुने हो र ? पर्यटन विस्तारका लागि भनेको कार्यक्रममा मानवीय सुरक्षाका विषयमा यस्तो लापरबाही ? योचाहिँ हदै भएको छ ।
त्यसैले, हात्ती दौड पशु अधिकार र मानवीय सुरक्षाका दृष्टिले पनि आलोचित काम हो । अनि, यो काम यस्तो ठाउँमा भएको छ, जहाँ वन्यजन्तुमा आधारित पर्यटन फस्टाएको छ । वन्यजन्तुसँग जोडिएको पर्यटन गर्ने ठाउँमा बस्ने व्यवसायीहरुले यो संवेदनशीलतालाई किन ख्याल नगरेका हुन् ? कि कुनै दुर्घटनाको पर्खाइमा बसेका हुन् ? यसपटक केही सुधार गरेको आयोजकहरुको भनाइ छ, जुन सुधार पर्याप्त छँदै छैन ।